အပြင်းစားလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်ရင်းကကိတ်လွန်းတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှလေးတွေကိုပါ ပြသလိုက်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယို – Online News Post
အပြင်းစားလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်ရင်းကကိတ်လွန်းတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှလေးတွေကိုပါ ပြသလိုက်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယို
ရုပ်သံ ဖိုင် ထဲမှာ တော့ နွယ်နွယ်ထွန်း က သူ့ရဲ့ လှပတဲ့ ဘော်ဒီ အချိုး အစားလေး ကို အထင်းသား ပေါ်လွင် နေ ပြီး ခပ်မိုက်မိုက်‌ ပုံစံလေး တွေနဲ့ ဓာတ်ဖမ်း ထားတာဖြစ် ပါ တယ် ။ ဒီပုံလေး တွေနဲ့ လည်း နွယ်နွယ်ထွန်း က ” ကြိုးစား နေတာကို ဘယ်တော့ မှ မရပ် ပါနဲ့ … မနက် ဖြန်ဆို Gym ဆော့တာ ၁ လ ပြည့် ပီ လေ … ” ဆို ပြီး ရေးသား ဖော်ပြ ထား ပါ သေး တယ်။ ကဲ … ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ gym ဆော့ ကစား ရင်း ရိုက် ထားတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း ရဲ့ ရင်ခုန် စရာ ပုံရိပ် လေးတွေ ကို ပြန် လည်ဖော်ပြ ပေး လိုက် ပါ တယ် … .
ပရိသတ် ကြီးရေ လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ မှာ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ အသည်း ကို အချိန် တို အတွင်း ခြွေချ ထားတဲ့ သူက တော့ မော်လ်ဒယ်လ် သရုပ် ဆောင် နွယ်နွယ်ထွန်း ပဲဖြစ် ပါ တယ် … . သူမဟာ လက်ရှိ မှာ တော့ အနုပညာ လှုပ်ရှား မှု အနေ နဲ့ photo shooting တွေ အပြင် ကြော်ငြာတွေ ကို လည်း ရိုက်ကူး ထား တာတွေ့ ရပါ တယ် ။ နွယ်နွယ်ထွန်း ဟာ ဖြူဖွေး နုဖက် နေတဲ့ အသား အရည်လေး တွေအ ပြင် သွယ်လျ ကျစ်လျစ် တဲ့ အမိုက်စား ကိုယ် လုံးလေး နဲ့ လှရက်လွန်း နေသူပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … .
နွယ်နွယ်ထွန်း က ဝတ်စား ဆင်ယဉ်မှု တွေမှာ လည်း ဆန်းသစ် တဲ့ အလန်း စား ဖက်ရှင် ဝတ်စုံလေး တွေ ကို စမတ် ကျကျ ဝတ်ဆင် တတ်တဲ့ သူ ပဲဖြစ် ပါ တယ် … . ဒါ့အပြင် သူမ ဟာ မကြာ ခဏ ဆို သလို ဆွဲဆောင် မှု ရှိပြီး ရင်ခုန် စရာကောင်း လောက် တဲ့ အလန်း စား ပုံရိပ်လေး တွေ ကို ဖော်ပြ ပေးတာ တွေ့ရပါ တယ် … . ဒီတစ်ခါမှာ လည်း နွယ်နွယ်ထွန်း က gym ဆော့ကစား နေရင်း ရိုက်ထား တဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို တင်ပေး လာပါ တယ် … .
႐ုပ္သံ ဖိုင္ ထဲမွာ ေတာ့ ႏြယ္ႏြယ္ထြန္း က သူ႔ရဲ့ လွပတဲ့ ေဘာ္ဒီ အခ်ိဳး အစားေလး ကို အထင္းသား ေပၚလြင္ ေန ၿပီး ခပ္မိုက္မိုက္‌ ပုံစံေလး ေတြနဲ႔ ဓာတ္ဖမ္း ထားတာျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဒီပုံေလး ေတြနဲ႔ လည္း ႏြယ္ႏြယ္ထြန္း က ” ႀကိဳးစား ေနတာကို ဘယ္ေတာ့ မွ မရပ္ ပါနဲ႔ … မနက္ ျဖန္ဆို Gym ေဆာ့တာ ၁ လ ျပည့္ ပီ ေလ … ” ဆို ၿပီး ေရးသား ေဖာ္ၿပ ထား ပါ ေသး တယ္။ ကဲ … ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးေရ gym ေဆာ့ ကစား ရင္း ရိုက္ ထားတဲ့ ႏြယ္ႏြယ္ထြန္း ရဲ့ ရင္ခုန္ စရာ ပုံရိပ္ ေလးေတြ ကို ျပန္ လည္ေဖာ္ၿပ ေပး လိုက္ ပါ တယ္ … .
ပရိသတ္ ႀကီးေရ လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ မွာ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလး ေတြနဲ႔ ပုရိသေတြရဲ့ အသည္း ကို အခ်ိန္ တို အတြင္း ေႁခြခ် ထားတဲ့ သူက ေတာ့ ေမာ္လ္ဒယ္လ္ သ႐ုပ္ ေဆာင္ ႏြယ္ႏြယ္ထြန္း ပဲျဖစ္ ပါ တယ္ … . သူမဟာ လက္ရွိ မွာ ေတာ့ အႏုပညာ လႈပ္ရွား မႈ အေန နဲ႔ photo shooting ေတြ အျပင္ ေၾကာ္ျငာေတြ ကို လည္း ရိုက္ကူး ထား တာေတြ႕ ရပါ တယ္ ။ ႏြယ္ႏြယ္ထြန္း ဟာ ျဖဴေဖြး ႏုဖက္ ေနတဲ့ အသား အရည္ေလး ေတြအ ျပင္ သြယ္လ် က်စ္လ်စ္ တဲ့ အမိုက္စား ကိုယ္ လုံးေလး နဲ႔ လွရက္လြန္း ေနသူပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
ႏြယ္ႏြယ္ထြန္း က ဝတ္စား ဆင္ယဥ္မႈ ေတြမွာ လည္း ဆန္းသစ္ တဲ့ အလန္း စား ဖက္ရွင္ ဝတ္စုံေလး ေတြ ကို စမတ္ က်က် ဝတ္ဆင္ တတ္တဲ့ သူ ပဲျဖစ္ ပါ တယ္ … . ဒါ့အျပင္ သူမ ဟာ မၾကာ ခဏ ဆို သလို ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိၿပီး ရင္ခုန္ စရာေကာင္း ေလာက္ တဲ့ အလန္း စား ပုံရိပ္ေလး ေတြ ကို ေဖာ္ၿပ ေပးတာ ေတြ႕ရပါ တယ္ … . ဒီတစ္ခါမွာ လည္း ႏြယ္ႏြယ္ထြန္း က gym ေဆာ့ကစား ေနရင္း ရိုက္ထား တဲ့ ဗီဒီယိုေလး ကို တင္ေပး လာပါ တယ္ … .
Previous post အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ ရင်ကိုဝုန်းဒိုင်းကြဲအောင် အမြဲ လုပ်တတ်တဲ့ ခေးကြီးလုကတော့ အမိုက်စားပုံတွေနဲ့ စွဲဆောင်လိုက်ပြန်ပြီ
Next post အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအရာလေးနဲ့ အသစ်ဆန်းလေး Tik Tokဆော့ပြလိုက်တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး